Ingcebiso yezobugcisa-uMika Pipeline Technology Co, Ltd.
Ubuninzi bemagnethi yezinto ezisemgangathweni
Uninzi lwee-clamp zenziwe ngamabakala ohlukeneyo ngentsimbi engenasici. Ngokwesiqhelo, abathengi baya kusebenzisa i-magnets ukubona umgangatho wezinto. Ukuba kukho umazibuthe, izinto ezingalunganga azilunganga. Ngapha koko, okuchaseneyo kuyinyaniso. Magnetism kuthetha ukuba izinto eziluhlaza zinobunzima obuphezulu kunye namandla aphezulu. . Ngenxa yokuba i-clamp eyenziweyo ngoku ihlala yenziwa ngentsimbi ye-austenitic enje nge-201, 301, 304, kunye ne-316, emva konyango lobushushu, izinto ezingavuthiyo zinokuba zingezizo zonke ii-magnetic, kodwa izixhobo ezisetyenziselwa ukuvelisa i-clamp kufuneka zihlangane nobunzima kunye nobunzima bemveliso ngokwayo. , Ke ubunzima kunye nokuqina obuthathaka kunokuhlangatyezwana kuphela nenkqubo yokuqengqeleka ebandayo, efuna ukuba isixhobo esithobekileyo siqengqelezwe kumtya omncinci obandayo ojikelezayo. Emva kokuqengqelwa yingqele, ngokuqinisekileyo ziya kuba nzima kwaye zikhuphe indawo yemagneti.
Indima ye-lubrication screws
Okwangoku, ungqimba lomdalo kumphezulu wensimbi yecarbon plated edlala indima yokuthambisa. Uninzi lwe-screws zensimbi kwi-DIN3017 clamps nazo zenziwe i-galvanic, ezinokudlala indima yokugcoba. Ukuba awuyifuni i-zinc plating, udinga i-wax enjenge-oyile. Ngalo naliphi na ixesha, i-wax compact iyomiswa, amaqondo obushushu ngexesha lokuhamba okanye imeko enobunzima iya kubangela ilahleko, ngoko ke ukuthambisa kuya kuncipha, kungoko kunconyelwa ukuba isikali sesinyithi sibotshwe kwakhona.
I-T-bolt ikhampasi nentwasahlobo
I-T-bolt clamp enentwasahlobo zihlala zisetyenziswa kwilori enzima yelori kunye neenkqubo zomoya. Isizathu sentwasahlobo kukulamla ukwanda kunye nokususwa konxibelelwano lwe hose. Ke ngoko, xa ufaka le khampasi, kuya kufuneka unikele ingqalelo kwisiphelo sentwasahlobo ayinakuba phantsi ngokupheleleyo. Ukuba kukho iingxaki ezibini ngokuchanekileyo: enye kukuba intwasahlobo ilahlekelwa ngumsebenzi wokulamula ukwanda kwe-thermal kunye ne-contraction kwaye ibe yisikhala esomeleleyo; nangona oku kunokuncipha ngandlela ithile, akukho ndlela yakuhlengahlengiso kulwandiso lwe-thermal kunye nosetyenziso. Okwesibini kukufudumeza kwenkqubo yokomelela, umbhobho uya kuba noxinzelelo olukhawulezayo, yonakalise imibhobho yokufakelwa kombhobho, kwaye inciphise kakhulu inkonzo yenkonzo yokuqinisa ngokukhawuleza.